Izindleko nezindlela eziyisisekelo ukusatshalaliswa zabo
izindleko - ke kubiza amabhizinisi ekhiqizwa izimpahla enkulu ekwakhekeni izinhlobo eziningana, zingase ngokuthi izindleko jikelele nezokuphatha. Ziyakwazi esinye sezici ezibaluleke kakhulu lapho kokubala izindleko zokukhiqiza.
Kuze kube manje, i-accountants umbuzo uyasala mayelana nendlela ukusabalalisa kahle izindleko futhi iyiphi indlela ukukhetha. Kungakhathaliseki indlela ethize ikhethwa, siyohlale iphesenti Ukuhlanekezelwa nezinto ezinganembile. Ngokuqondene nalokhu umsebenzi ochwepheshe abafanelekayo cabanga ukwamukelwa of ikhambi elilungile ezazizosiza ukunciphisa ngeziphambeko ezinjalo. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi abanekhono ne indlela okunengqondo kungaba ngokuphawulekayo ngcono izici ikhwalithi, khomba ukuphumelela imisebenzi eyinhloko yebhizinisi.
Ngakho, izindleko kufaka phakathi izinhlangano e abasebenzi abaphathi zabasebenzi, zonke izindleko zosizo, izinkokhelo ukuqasha, ukukhanda wamanje imishini kanye izakhiwo. Lezi zinhlobo nezindleko ayikwazi ngokuqondile kuthiwa alotshwa izindleko zokukhiqiza, ngakho uMnyango abasebenzi ezimali lokuqala buthelela imali ku-akhawunti ehlukile, bese kusuka inani wenza ukuthumela ku izihloko ezithile kanye izinhlobo zemikhiqizo. Imfihlo yempumelelo itholakala Ukukhetha efanele yokwabiwa ngezabelo ezithile.
Yiqiniso, accountant lokuqala Kutfutfukisa livuma lohleliwe ukugeleza rate, kamuva kufanele unamathele abasebenzi. Ngokwesibonelo, ukwabiwa izindleko ngokuya ukusetshenziswa imishini kudinga ukucabanga owandulelayo izindleko ngehora ezibangelwa izinhlobo ezithile imishini. Ngakho, indlela osebenzisa ngayo imali kwi usekelo umshini amathuluzi nezinye izinto zisesimweni ukusebenza kunqunywa silingane base ifakiwe. Ngenxa yalokho, ngokuvamile esetshenziselwa amaholo abo abasebenzi abaqashwe ukukhiqizwa eyinhloko, kulinganiselwa isilinganiso isici.
Ake sicabangele uhlelo ukusatshalaliswa, kuncike iholo. Ukuze abale izindleko, kubalulekile kuqala kuzo zonke ukuqoqa idatha ku inani amaholo eziyisisekelo abasebenzi abashe imibhalo eyinhloko inkampani. Ngokulandelayo, umsebenzi kohlaziyo okubhekiswe ekusunguleni iphesenti Izindleko zangempela kanye nomholo. Thina uthole ukubaluleka Coefficient, ngawo ungenza ukuthunyelwa sezinhlobo ezithile imikhiqizo kanye izinhlobo zomsebenzi. Lokho, ukuthola isisindo ethile izindleko bezimpahla ezikhiqiziwe.
Indlela ngenhla Kulula kakhulu ukusebenzisa, ngakho-ke isetshenziswa amabhizinisi iningi ezweni lethu. Nokho, ezimweni yesimanje, it has bokwenza abalulekile njengoba izindleko engaqondile kukhona incike ngezinga ezishintshayo yenqubo ukukhiqizwa. Ngakho, kulapho ulwazi olusha ukuchwepheshe obusetshenziswa ibhizinisi, kancane izindleko idatha kuyadingeka ukuze ukukhiqizwa.
Phakathi kwezinye izindlela izindleko Kwabiwa kungenziwa waphawula, nezinye, kuye ikakhulukazi base ekhethiwe. Ngokwesibonelo, njengoba ngezabelo yilezi ezilandelayo:
inani okukhipha (elisetshenziswa yokusansimbi nezimboni zokudla);
umkhawulo izindleko value (elihambisana izinhlangano chemical);
inani izilinganiso workshop ngalunye ngokuhlukile;
Ekuphetheni, siphawula ukuthi izindleko kufanele kubhekwe njengethuluzi eliphumelelayo ngokuthuthukisa inqubo ukukhiqizwa. Futhi efanele ke ungakwazi ukwenza ngcono isimo sezimali inkampani.
Amaphuzu 10 accounting. amafa engaguquki
-Daylight alindele bazuze ngesisekelo izinguquko 2012
Radeon HD 4670: izici kanye nokubuyekeza
Inhloko-dolobha yaseGeorgia - Tbilisi, amahle
Ukudla okuthandwayo ka eyikati
Ukuphathwa isifo sokuqaqamba kwamalunga
Umzila wokuzungeza Umhlaba: uhambo okungavamile emhlabeni Sun.
Nini futhi kanjani ukubhalisa emtholampilo yabakhulelwe? Ukubhaliswa Ukukhulelwa
Nesifo Ezingalapheki, ukwelashwa kanye Ukudla
Chipped izinyo - kungani lokhu kwenzeke?
Yezwakala Hairstyle ekhaya ku nezinwele ezimfishane
Izinhlobo zomlando emphakathini